Faahfaahino kasoo baxaya weerar ay Al-Shabaab ku qaadeen deegaanka Ceel-Geelle – Hornafrik Media Network
Wararka aan ka heleyno gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay xalay weerar ku qaadeen saldhig ay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay ku leeyihiin deegaanka Ceel-Geelle oo hoos taga degmada Balcad.
Dagaal socday mudo kooban ayaa waxaa la sheegay in uu dhex maray labada dhinac, isla markaana ay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay iska caabiyeen weerarkaas ay kusoo qaadeen Al-Shabaab.
Dagaalka kadib ayaa waxaa la sheegay in labada dhinac ay isku adeeg-sadeen madaafiic, kadib markii Shabaab-kii soo weeraray deegaanka Ceel-Geelle, oo dib uga laabtay ay deegaanka kusoo garaaceen madaafiic, halka ciidanka dowladda iyo AMISOM ay iyaguna madaafiic kale ugu jawaabeen.
Fiidkii hore ee xalay waxaa la sheegay in diyaaradaha dagaalka ay dul wareegayeen deegaanka uu dagaalku ka dhacay ee Ceel-Geelle iyo nawaaxigiisa, kuwaas oo baacsanaya dagaalamayaashii weerarka ku qaaday ee Al-shabaab.
Dadka deegaanka ayaa noo sheegay in cabsi badan ay kasoo wajahday duqeymo ay fuliyaan diyaaradahaas, balse aysan geysan wax duqeymo ah.
Dad ku nool deegaanka Ceel-Geelle ayaa noo sheegay in Shabaab-kii weerarka soo qaaday ay galeen dhul keyn ah oo ku teedsan deegaanka, kadib markii ay dagaalka kusoo biireen diyaaradaha dagaalka oo mudo dul meereysanayey hawada duurka iyo deegaanka Ceel-Geelle ee gobolka Shabeellada Dhexe.
Jubbaland oo dil ku xukuntay askari ka tirsan ciidanka xoogg dalka